Buugaag loogu Deeqay Maktabadda Akadeemiye Goboleedka Af Soomaaliga (AGA) - AGA - Akadeemiya Goboleedka AfSoomaaliga
Home kaydka Buugaag Buugaag loogu Deeqay Maktabadda Akadeemiye Goboleedka Af Soomaaliga (AGA)
Buugaag loogu Deeqay Maktabadda Akadeemiye Goboleedka Af Soomaaliga (AGA)
Munaasabad lagu maamuusayay wareejinta deeq kutubbo ah oo naadiyada akhriska iyo maktabadda Muqdisho ay ugu tala-galeen makatabadda Akadeemiye Goboleedka Af Soomaaliga ayaa 11/6/2022 waxaa lagu qabtay xarunta AGA ee magaalada Muqdisho.
Guddoomiyaha qabanqaabada daahfurka xarunta AGA, diyaarinta shirweynaha Akadeemiyada iyo xuska 50-guurada afka Soomaaliga Prof. Cabdalla Cumar Mansuur iyo xubno ka tirsan 𝗚olaha fulinta ee 𝗔𝗚𝗔 iyo hawl-wadeennada Akadeemiyada ee Muqdisho ayaa si diirran xarunta maktabadda ugu soo dhaweeyay madaxdii naadiyada iyo maktabadda Muqdisho ee xarunta dhexe ee Akadeemiyada soo gaarsiiyay deeqda kutubadda ah.
Hadal ay halkaasi ka soo jeediyeen madaxda naadiyada Xamar iyo Banaadir iyo maamulka maktabadda Muqdisho ayaa sheegay ujeedka buug-gaarsiinta maktabadda cusub ee A𝗚𝗔 in ay qayb tahay howlgalka u hiilinta afkeena hooyo iyo sidii bulshada loogu dhiirrigelin lahaa akhris-qoraalka, iyaga oo ballanqaaday in ay sii joogteyn doonaan tageerada maktabadda Akadeemiyada iyo wada shaqaneynta AGA.
Prof. Cabdalla Mansuur, Dr. Cabdinaasir Axmed Ibraahim, Macallin Saciid Saalax iyo Prof. C/qaadir Ruumi oo ka hadlay guddoonka kutubtaasi ayaa halkaasi uga mahadnaqay dhallinyarada maktabadda AGA soo gaarsiisay deeqda kutubadda ah.
Kutubadda ay naadiyada Xamar, Banaadir iyo mamaulka makatabadda Muqdisho soo gaarsiiyeen xarunta AGA ayaa ka koobneyd buugaag kala duwan, kuwaasi oo kor u dhaafayay in ka badan 100 buug.
Horey ayaa maktabadda AGA waxaa deeq kutubbo ah us oo gaarsiiyay Golaha Midowga Qorayaasha Soomaaliyeed, xarunta Laashin, qorayaal iyo dhallinyarda jecel akhriska iyo qoraalka.